मोबाइलफोनका रोचक १० तथ्यहरु यस्तो छ - IAUA
मोबाइलफोनका रोचक १० तथ्यहरु यस्तो छ
ramkrishna October 7, 2017	मोबाइलफोनका रोचक १० तथ्यहरु यस्तो छ
१.जापानमा बेचिने मोबाइफोनहरु प्राय धेरै वाटरप्रूफ नै हुन्छन् किनकी त्यहाका धेरै युवायुवतीहरु नुहाउने समय पनि मोबाइलफोन प्रयोग गर्ने गर्दछन्।
२.इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगलले आफ्नो लाइभ ट्राफिक फिड्सलाई अपडेट गर्न विश्वको एन्ड्रोइड फोनको जीपीएसद्वारा ट्र्याकिङ गर्ने गर्दछ।
३.द म्यासिङटन मस्को हटलाइन उर्फ द रेड फोन सन् १९६३ मा पेन्टागन र क्रेमलिनबीच सिधा सञ्चार गर्न स्थापना गरिएको थियो। यसको उद्देश्य थियो छिटो तरिकाले परमाणु युद्ध रोक्नु जसलाई माइबाइल फवनले पूरा गरिदियो।
४.एप्पल कम्पनीका सह-संस्थापक स्टीभ वोजनिकले आफ्नो सबैभन्दा पहिलो मोबाइल नम्बर ८८८-८८८-८८८८ लिएका थिए। जसमा धेरैभन्दा धेरै गलत नम्बरबाट फोन आउनेगर्दथ्यो। विशेष गरी बालबालिकाले गर्ने गर्दथे। उनीहरुले एउटै नम्बर डायल गरेर फोन गरिदिन्थे।
५.सन् १९९६मा मलेसियामा सरकारले धेरै मोबाइल फोन चोरी हो कि होइन जाँच गरिरहेका बेला धेरै मोबाइलफोन प्रयोग गर्नेहरु माछा मार्नेहरुले बोक्ने गरेको पत्ता लगायो किनकी माछालाई मोबाइलफोनको आवाजले आकर्षण गर्ने गरेको तथ्य पत्ता लागेको थियो।
६.सोन्जा क्रिस्टियनसेन संसारकै सबैभन्दा मोबाइलमा छिट्टो लेख्ने महिला हुन्। उनले यो सन्देश (The razor-toothed piranhas of the general Serrasalmus and Pygocentrus are the most ferocious freshwater fish in the world. In reality, they seldom attackahuman)सेकेन्डको भरमा टाइप गरेर पठाउकी थिइन् ।
७.फ्रान्सका नागरिक सोलेने सान जोसे(Solenne San Jose)ले मोबाइल फोन किन्दा उसको बिल ११ क्वाड्रिलियन युरो भन्दा बढी परेको थियो। जो पुरै विश्वको जीडीपीको १५० गुना भन्दा बढी हो। कम्पनीले उसलाई पहिले किस्तामा भुक्तानी गर्न भनेको थियो। तर पछि कम्पनीले उसँग माफी मागेको थियो।
८.करीब एक टन नष्ट गरिएको मोबाइलफोनमा ६० टन वास्तविक सुन पाइन्छ।
९.सन २०१३ मा मोबाइल फोनबाट विश्वभर करीब ९ खर्बभन्दा बढी टेक्स्ट म्यासेज पठाइएको थियो। यसको मतलब पुरै विश्वको प्रत्येक व्यक्तिले औसत १२ सय टेक्स्ट पठाएका थिए।
१०.आइबिएम( IBM)ले सन १९९३ मा आइबिएम सिमोन (IBM Simon)नामको पोन ल्याएको थियो। जसबाट इमेल पठाउने व्यवस्था समेत राखिएको थियो।
Previous Previous post: पहाडमा भूकम्प प्रतिरोधी घर कसरी बनाउने ?
Next Next post: अनलाइनमार्फत पैसा कमाउने पाँच तरिका